पाठक प्रतिक्रिया - ३ - Safal Stories
Home Reader's Blog पाठक प्रतिक्रिया – ३
पाठक प्रतिक्रिया – ३
हजुरहरुको सुझाव र शब्दहरुले मलाई धेरै हिम्मत दिएको छ।
म आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्दछु की मैले हजुरहरुबाट धेरै राम्रा कुराहरु सिक्न पाएँ।
– सरिता महादेव
सफल स्टोरिज मेरो मनको सबैभन्दा नजिकको साथी हो । सफल स्टोरिज टिमलाई धेरै धन्यवाद।
– निर्मला लामा
जब सफल स्टोरिज आयो, तब देखिनै असफल तथा असफलता हुन लागेका सम्पूर्ण मनहरुमा उत्प्रेरणा जगाउँदै गईरहेको छ र सफलता दिलाएको छ।
त्यसैले यसको निरन्तरता साथै प्रगति को शुभकामना !!
– कृष्ण क्षितिज
जसले गर्दा म सफल भएको छु, अरु के भनूँ !
– कुन्दन राज पण्डित
यो पेज आसध्यै राम्रो छ । यस्तै पोस्ट गर्दै जानुहोस् , हामी जस्ता युवाहरुलाई धेरै नै खाँचो छ ।
धेरै राम्रो छ। टिप्स अनुसन्धानमूलक भए अझ राम्रो हुने थियो ।
– विशाल सुवेदी
मलाई यो पेज एकदम मन पर्छ। म यसको कथा प्रेरक भनाईहरु नियमित पढ्ने गर्छु, कथा र प्रेरक भनाईहरु नियमित प्रकाशित भईरहोस् भन्ने चाहान्छु ।
– रुपा थापा
तपाईंलाई हाम्रो पेज कस्तो लाग्छ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ र अझ के भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ ? हजुरले हामीलाई कमेन्ट, इनबक्स वा इमेल मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ । हामीले हजुरहरुका प्रतिक्रियालाई मनन गर्नेछौं। हजुरहरुको यो साथ र मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ! अझ धेरै हिंड्नु छ, तपाईं-हामी मिलेर संगै हिंड्नुछ।
Nextशरीरमा २९ वटा शल्यक्रिया : लेखक, दौड खेलाडी र प्रेरक वक्ता